5 mienzaniso yetsamba uye maitiro ekugadzira inoshanda kune yako kambani | ECommerce nhau
5 mienzaniso yetsamba uye maitiro ekugadzira inoshanda kune yako kambani
Jose Ignacio | | eCommerce, StartUps uye vanamuzvinabhizimusi
Kukosha kweizvo zvinonzi matsamba akaumbwa zvinopfuura mabhizinesi echinyakare uye zvakwana zvizere kutengeserana kwemagetsi, sezvazvingave zviri kwauri. Zviri nezve tsamba yetsamba Ibhuku rinogarogovaniswa, rinotarisana nedingindira rimwe chete. Tsamba zhinji dzinoburitswa nemakirabhu, nzanga, masangano, mabhizinesi nemakambani kupa ruzivo rwekufarira kunhengo dzavo kana vashandi vekampasi imwechete.
Zvinoitika zvacho ndezvekuti kazhinji vanhu kana makambani anogamuchira rudzi urwu rwekutaurirana ndivo vanyoreri vakamboratidza kufarira chiziviso uye vakakumbira kuti vagamuchire ruzivo neposvo. Uye zvakare, haigone kukanganwika kuti icho chikamu cheyakanyanya nzira yekuyedza kuchengetedza vatengi kana vashandisi. Zvekuti nenzira iyi, ivo vanowanikwa kana kungo wedzera kugamuchira kuti vatengese zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu.
Nepo kune rimwe divi, iyo inofanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi kuti haisi chaiyo yekutengesa chishandiso. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoenderana nenyaya yekuti mukupedzisira iwe unogona kuwana pesvedzera vanyori vako zvisina kunangana. Uine hukama hwepedyo kwazvo nedzimwe nzira mukushambadzira kwedigital uye izvo zvinogona kubatsira nguva nenguva kushambadzira zvigadzirwa zvako nenzira inoshanda, zvine musoro uye pamusoro penzira dzese dzakaringana.
1 Nhau dzemashoko: zvipo zvavo zvikuru
2 Muenzaniso wemakambani etekinoroji
3 Kubva kumakambani ebasa
4 Makambani akabatana nefashoni uye zvipfeko
5 Kuita chikamu chakadzama
6 Shandisa zvinokwezva uye zvinotaridzika zvidzidzo
Nhau dzemashoko: zvipo zvavo zvikuru
Ehezve, ino sisitimu inogadzira akawanda mabhenefiti kune yako bhizinesi bhizinesi uye zvakanyanya kupfuura iwe zvaunofunga kubva pakutanga. Iwe unoda kuziva here zvakakosha zvikonzero zveichi chirevo? Zvakanaka, nyatsoteerera uye iwe unozodzidza kukosha kwakatorwa nenhau senhau sechirongwa mukushambadzira kwedigital mumakore achangopfuura.
Izvo hazvitore mari hombe yekudyara, kana zvisiri izvo zvinoda kuzvipira kwakawanda uye kuda kuita ino tsamba.
Izvo zvave kuumbika seimwe yeakanakisa migero yaunayo panguva ino tengesa zvigadzirwa zvako. Kunyanya kana iwe uine zano rakanaka iwe unogona kuve nekushandurwa kwakawanda kupfuura mune mamwe magero. Uye chii chakanyanya kukosha, iine hukuru hukuru pane iwo mameseji iwe aunotumira kune vako vanyori.
Usakanganwa kuti izvi zvinoreva kutaurirana zvinoita kuti vanyorese kuziviswa yenhau dzichangoburwa nekusimudzirwa kwechako. Kunyanya kana ivo vari vehukama kune chikamu uko yako yepamhepo chitoro kana commerce inosanganiswa.
Izvo zvakakosha kuti iwe ufunge kuti ino sisitimu yekugadzira zvinongedzo inogona kuve mune ipfupi nzvimbo yenguva imwe yemasosi makuru emigwagwa kune yako webhusaiti kana blog. Kusvika padanho rekuburitsa mabhenefiti makuru kune ako bhizinesi zvido
Nei usingazvitaure, icho zvakare chishandiso chine simba che chengetedza vatengi zvinobudirira kupfuura pakutanga. Izvi zvinodaro nekuti zvinogadzira zvinongedzo zvekutora chikamu muchikamu ichi chezviitiko uye mukupedzisira vatengi kazhinji vanonyanya kushanda kupfuura pakutanga.
Muenzaniso wemakambani etekinoroji
Chimwe chezviratidzo zvekuti ino sisitimu inoshanda kwazvo inomiririrwa nemakambani akabatanidzwa mumatekinoroji matsva. Kubva kwauinazvo akaudza mushandisi dzenhau dzichangoburwa dzinogadzirwa, kungave kubva kubato kana kubva kukambani pachayo. Kubva iko kunobatsira kwazvo kuvhura iyi mhando yetsamba dzeruzivo. Kune dzakateedzana zvikonzero izvo isu tichaenda kutsanangura pazasi:
Iyo inovandudza mufananidzo wekambani uye kunyanya kana zvasvika kune mabhizinesi mitsara yakabatana nehunyanzvi hutsva.
Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuzivisa vatengi kana vashandisi venhau iyo inogadzirwa kubva muchikamu chaicho.
Icho chinhu chakanaka chekumisikidza kumisikidza maratidziro atiri kuvandudza chero nguva uye mamiriro, kunyangwe kuzivisa zvemakambani nhau dzekambani pachayo.
Iyo fomati inoenderana nematanho matsva munzira yekuuya bhizinesi. Nemamwe maitiro ane hukasha kupfuura aya anga akajairika kusvika makore mashoma apfuura.
Zvitsigiso zvakasiyana zvinogona kushandiswa, zvese zvinyorwa zvemukati uye odhiyo uye zvinoonekwa zviwanikwa, zvinoenderana nekubatsira kuchazopihwa kune aya anodzidzisa uye ekusimudzira mabhizinesi bulletin.
Kubva kumakambani ebasa
Ichi ndicho chimwe chezvikamu zvikuru zvebhizimusi uko tsamba dzemishumo dziripo chaizvo mumakore achangopfuura. Kusvika padanho rekuti chikamu cheichi chiitiko chekushambadzira zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Pasi pemhando ipi neipi yekutaura kana zano mukushambadzira kwedhijitari. Kure pamusoro pemamwe mativi ebhizimusi jira kutenderera pasirese uyezve kuSpain.
Mushure mekunongedzera zvese zvinopihwa zvezvigadzirwa zvako, bhokisi remavara rinowoneka apo mamiriro ezvekusimudzira akanyorwa, zvakajeka. Zvinhu izvi zvinowanzoiswa panoperera tsamba, muzvinyorwa zvidiki uye neruvara rusingatarisike zvakanyanya.
Pane zvinopesana, avo vanobva kumakambani ebasa vakasarudza kuzviisa munzvimbo inooneka uye fomati, vachifambisa mufananidzo wekujeka uye kuvimba kune vatengi vavo.
Dhizaini yetsamba iyi zvakare yakanaka kwazvo uye inowirirana nevateereri vateereri, mhuri. Iyo yakawanda inodaidzira chiito (CTA) uye mashandisiro ekushandisa mavara kukwezva vaverengi kubatsira mukutaurirana.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti mune ino chaiyo kesi, yekupedzisira uye huru chinhu chekuburitsa iri pazasi peiyo tsamba, uko kwese mafomu ekubhadhara uye online trust chisimbiso inowanikwa. Ndokunge, iwe unogadzira kuvimba kwakanyanya mune chimwe chikamu cheichi chiitiko uye izvo zvinodikanwa zvakanyanya kuti iwe ugone kukura mukati mechitoro chako kana bhizinesi repamhepo. Ehezve, mashandisiro ayo haazokuvhiringidze iwe chero nguva kana neimwe nzira.
Makambani akabatana nefashoni uye zvipfeko
Icho chaicho chimwe chikamu mubhizinesi redhijitari uko zano iri risingafanire kushomeka mukushambadzira kwemazuva ano kwakananga. Nekuti zvirokwazvo, mune ino kesi, hongu, inogona kuve nezvinhu zvakawanda zvitsva zvakabatanidzwa, semumienzaniso inotevera iyo yatiri kuzokuratidza:
Mufananidzo wakakurumbira uyo unotaurisa uye unokwezva kutarisisa kwevanogamuchira aya matsamba akakosha.
Chinyorwa chipfupi kana typographic mufananidzo wekuzadzisa iyo ruzivo nezvimwe zviwanikwa uye pamusoro pese kugona.
Uye zvechokwadi, kubva panguva ino zvichienda mberi, bhatani rekutenga kana kufona kune chiito hakufanirwe kushaikwa kukurudzira zvigadzirwa zvaunopa nguva dzese.
Ndichiri kune rimwe divi, ichokwadi zvakare kuti pakutanga tinoona iyo logo yechiratidzo uye diki menyu yezvisungo, asi zvakare tinoona dhizaini yakapusa kwazvo yetsamba idzi, uye zvirokwazvo hazvikonzerwa nekushaikwa kwezita rezviwanikwa. Kana zvisiri, pane kudaro, izvi zviri nyore nekuti iri fomati inoshanda. Kugadzira email yekushambadzira yakadai iri nyore kwazvo kushandisa vamwe vapepeti uye kunyanya nemhedzisiro inonakidza yezve bhizinesi rako kubva ikozvino.
Kuita chikamu chakadzama
Mukati mekutengesa kweemail zvakananga, chidimbu chinoreva iyo kupatsanurwa kwemashoko ako e data muzvikwata zvichienderana neruzivo rwawakaunganidza kana kuti urwo urikutora kubva kune vanonyorera (bonde, zera, nzvimbo, zvido, maitiro…) nechinangwa chekuvapa "zvakagadzirwa zvakagadzirwa.
Kunyangwe iwe uchikwanisa kutengesa chigadzirwa chimwe chete kana sevhisi, vatengi vako / vanyoreri havafanirwe kugara vachisangana nehunhu hwakafanana, saka kuvapa izvo zvakafanana zvirimo zvingave nemukana mushoma wekubudirira pane kuendesa imwe inonyatsoenderana nehunhu hwavo uye zvavanoda. .
Iri zano mukushambadzira kwedigital iro rinoshandiswa zvakanyanya nemakambani anotengesa zvigadzirwa zvakabatana netsika (mabhuku, maaudio, mavhidhiyo, ruzivo rwekutsigira, nezvimwewo), kubva kwavanoda nzira dzakasiyana kubva kune vamwe vese. Nemusiyano wakakura muzvinyorwa zvine ruzivo kuitira kuti iwe ugone kuchinjira kune mameseji eaya mabulletin kubva ikozvino.
Shandisa zvinokwezva uye zvinotaridzika zvidzidzo
Iyo nyaya ndeye yakakosha zvakanyanya nekuti inobata zvakananga iyo yakavhurika mwero, iri danho rekutanga kutora pfungwa yeanogamuchira uye kuvakurudzira kuti vaverenge zvatakatumira zvirimo. Izvo zvakakosha kuti utore nguva pane yakanaka nyaya, fungisisa dzakasiyana mikana, sarudza yakakodzera kwazvo, uye shandisa ese marudzi ebvunzo kuti uone kushanda kwavo. Ichi chihurongwa chisina kusarudzika chinogona kuiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzebhizinesi uye nemhedzisiro yakanaka kwazvo kubva pakutanga.
Kunyanya nekuti ivo vanowanzo gamuchirwa zvakanyanya nevano gamuchira aya akakosha meseji. Kubva pane ino maonero hapana mubvunzo kuti inogona kuve inoshanda kupfuura iyo iyo yakafumurwa. Uye nebhenefiti iyo ivo vari nyore kuitisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 5 mienzaniso yetsamba uye maitiro ekugadzira inoshanda kune yako kambani
Iwe unobatsira ecommerce? Inonyanya kukosha
Iko kukosha kwekutumidza mazita mubhizimusi repamhepo